စိတ်ဝင်စားစရာ မာမာရဲ့ ဝါသနာများ: September 2014
မာမာကြော်ဖြစ်တဲ့ အကြော်လေး တစ်ခုပေါ့ ပုဇွန်ခေါင်းချိုးလေးတွေကို ခေါင်းချိုးပြီး တန်ပူရာမှုန့်လေးနဲ့ကြော်ထားလို့ မွှေးမွှေးကြွတ်ကြွတ်လေး စားလို့အရမ်းကောင်းပါတယ်။
မာမာချက်တဲ့ဟင်းလေးတွေက အရမ်းကိုလွယ်ပါတယ် ချက်ရတာလဲမြန်ပါတယ် စိတ်ပါလို့ အခုကြော်ထားတဲ့ ပုဇွန်ကြော်လေးကို ကြော်စားကြည့်မယ်ဆိုရင် ကြော်နည်းလေး ပြောပြပါ့မယ်။
ရေဆေးပြီးခေါင်းဖြုတ်ထားသော ပုဇွန်အသေး - 150 g
တန်ပူရာမှုန့်. - ထမင်းပေါင်းအိုးဆန်ချင်ဗူး တစ်ဗူး
ရေ - ထမင်းပေါင်းအိုး ဆန်ချင်ဗူး တစ်ဝက်
ကြက်သားမှုန့်. - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဝက်
ပုဇွန် ကြက်သားမှုန့် နနွင်းမှုန့်တို့ကို အရသာနယ်လိုက်ပါ
တန်ပူရာမှုန့်ကို ရေနှင့်ဖျော်ထားပြီး ပုဇွန်အရသာနယ်နှင့် နယ်ပေးထားပါ
ဆီကို မီးပြင်းပြင်းနဲ့အပူပေးပြီး ဆီပူလာပါက မီးကို အနေတော်လျော့ပေးပါ
ပုဇွန်တန်ပူရာမှုန့် နယ်ထားတာကို ပန်းကန်ပြားပြန့်ပြန့်လေးထဲ ဖျန့်ထဲ့ပေးပြီး ဆီပူအိုးထဲသို့ အသာတွန်းချပြီး ထဲ့ကြော်ပေးပါ
တစ်ဖက်ကျက်ရင် တစ်ဖက်ကိုလှန်ပေးပြီး ရွှေဝါရောင် ဖြစ်လာတဲ့ထိ ကြော်ပေးပါ
Posted by Tuumar at 12:53 pm2comments:
ဒီနေ့ မိုးလေအေးအေးလေးမှာ ခြံထဲဆင်းပြီး သစ်ပင်စားပင်လေးတွေချစ်တဲ့ အိုင်အိုရာနဲ့မာမာ့ မိတ်တွေတွေအတွက် ပုံလေးတွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Posted by Tuumar at 11:23 am3comments:
ဒီနေ့တော့ ပုဇွန်ခွက်ကြော်လေး ကြော်ပြီး ချဉ်ငံစပ် အသုပ်လေး သုပ်စားဖြစ်ပါတယ် ကြော်နည်းလေးလဲ တင်ပြီးပါပြီ မာမာကတော့ အသုပ်ဆိုရင် ဒီအတိုင်း စားရတာထက် ထမင်းပူပူလေးနဲ့ကို ပိုပြီးကြိုက်ပါတယ် ဒါကြောင့်မို့လို့ ချဉ်ချဉ်ငံငံ စပ်စပ် အသုပ်လေး သုပ်စားဖြစ်တဲ့ နည်းလေးကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
ပုဇွန်ခွက်ကြော် - ဆယ်ချပ်
ခေါက်ဆွဲအစို - လေးဆယ်သား
ငရုတ်သီး အလှော်မှုန့် - လိုသလောက် ပြင်ထားပါ
ကြက်သွန်နီ ဆီချက် - လိုသလောက် ပြင်ထားပါ
မန်ကျည်းသီးမှည့် - ထမင်းစားဇွန်း နှစ်ဇွန်း
ပဲအကျက်မှုန့် - လိုသလောက် ပြင်ထားပါ
နံနံပင် - လိုသလောက် ပြင်ထားပါ
ပုဇွန်ခွက်ကြော်ကို ကပ်ကြေးဖြင့် အနေတော် ညှပ်ပေးပါ
မန်ကျည်းသီးမှည့်ကို ရေနှင့်ဆေးပြီး ရေအနည်းငယ်ထည့်ကာ စိမ်ထားပါ
ခေါက်ဆွဲနဲ့အတူ ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ပြင်ထားပါ
ပန်းကန်တစ်ချပ်ထဲမှာ ပုဇွန်ခွက်ကြော် နှစ်ခုစာ၊ ခေါက်ဆွဲဖတ် သင့်ရုံ၊ ဂေါ်ဖီ အနည်းငယ်၊ ကြက်သွန်နီ အနည်းငယ်၊ ငါးငံပြာရည် ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်း ၊ ပဲအကျက်မှုန့် ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်း ၊မန်ကျည်းသီးမှည့်ရည် ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်း ၊ အရသာမှုန့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဝက်သာသာ၊ ငရုတ်သီးအလှော်မှုန့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဝက်သာသာ၊ ဆီချက် ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်းခွဲနှင့် နံနံပင်တို့ ထည့်ပေးကာ ခပ်ဖွဖွ နယ်ပေးပါ
အရသာနယ်တာ သမသွားတာနဲ့ အရသာ မြည်းပေးကာ လိုအပ်တဲ့ အရသာကို ပြင်ပေးပါ
ပြီးတာနဲ့ ချဉ်ငံစပ် ပုဇွန်ခွက်ကြော်သုပ်ကို စားသုံးရန် ပြင်ပေးနိူင်ပါပြီ။
Posted by Tuumar at 10:15 am3comments:
ဒီနေ့ကြော်စားဖြစ်တဲ့ အကြော်လေးပေါ့ အိမ်ကသားနဲ့သမီး အရမ်းကြိုက်တဲ့ အကြော်လေးမို့ မကြာမကြာတော့ ကြော်ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ကယ်တန်းကြတော့ ပုဇွန်ခွက်ကြော်က ပုံးစံခွက်လေးထဲကို အကြော်နှစ်စပ်ထားတဲ့ ပဲပင်ပေါက်ရယ် ပုဇွန်ရယ်ကိုထဲ့ပြီးမှ ခွက်ကိုင်းကိုကိုင်ပြီး ဆီပူအိုးထဲနှစ်ပြီးကြော်ပေးရတာပါ။
အကြော်ကျက်လာတာနဲ့ ခွက်ထဲကနေ စောင်းပြီးဆီပူအိုးထဲ သွန်ချပြီး ခနထားပြီးတာနဲ့ ဆယ်ပြီးဆီစစ်လိုက်ရုံပါဘဲ။
မာမာကတော့ ပုဇွန်ခွက်ကြော်တဲ့ ခွက်မရှိတာနဲ့ ပန်းကန်ပြားပြန့်ပြန့်လေးပေါ် ပဲပင်ပေါက်နဲ့ပုဇွန်တင်ပြီး ဆီပူအိုးထဲကို အသာတွန်းချပြီး ကြော်ထားတာပါ။
ပုဇွန်ထုတ် - ခပ်ကြီးကြီး ၇ကောင်
တန်ပူရာမှုန့်. - ထမင်းပေါင်းအိုး ဆန်ချင်ခွက် တစ်ခွက်
ရစင်အောင် ဆေးထားသော ပဲပင်ပေါက် - 350 g
ပန်းကန်ပြားပြန့်ပြန့်လေးပေါ်သို့ မုန့်နှစ်လူးထားသော ပဲပင်ပေါက်နဲနဲနှင့် ပုဇွန်တစ်ကောင်ကို ထဲ့ပြီးပြင်ပေးထားပါ
ဆီကို မီးအပူပေးပြီး ဆီပူပြီးကျက်လာပါက မီးကိုအနေတော် လျှော့ပေးကာ ပဲပင်ပေါက်နှင့်ပုဇွန်ကိုထဲ့ကြော်ပေးပါ
မီးအရမ်းမများစေရန် သတိပြုပြီး ကြော်ပေးပါ
Posted by Tuumar at 5:08 pm3comments:
ရိုးရှင်းလွန်းတဲ့ ပုဇွန်လှော်လေးပါ ပုဇွန်ဆီကြော်တွေစားရတာ ရိုးသွားတဲ့အခါမျိုးမှာ ပုဇွန်လှော်ကို သံပုရာရည်လေးညှစ်ပြီး စားရတဲ့ အရသာလေးက သိပ်ကိုကောင်းပါတယ်။
ဒီပုဇွန်လှော်နည်းလေးက သိပ်ကိုလွယ်ပါတယ် ပုဇွန်အကွေး ငါးအနွေးဆိုတဲ့အတိုင်း ပုဇွန်ကိုရေမြုပ်ရုံနဲ့ဘဲ လှော်ပါမယ် သိပ်လွယ်လွန်းတဲ့ လှော်နည်းလေးမို့လှော်စားကြည့်စေချင်ပါတယ် အားလုံးလဲ ဒီပုဇွန်လှော်နည်းလေးကို လှော်တတ်ကြပါလိမ့်မယ်။
ရေစင်အောင်ဆေးထားသော ပုပုဇွန်ကြားအကောင်ကြီးကြီး ၈ကောင်
ရေခမ်းကာနီးပါက အိုးအဖုံးဖွင့်ပြီး မွှေပေးပါ
ရေခမ်းသွားပါက မီးပိတ်ပေးပြီးပါက ပုဇွန်လှော် မွှေးမွှေးလေးရပါပြီ။
Posted by Tuumar at 11:57 am2comments:
ဒီနေ့တော့ ငါးရံ့ခြောက်ကို ပြုပ်ပြီးအရိုးကိုထွင်ကာ အသားကို ကြိတ်စက်နဲ့ကြိတ်ပြီး ငရုတ်သီးအကြမ်းမှုန့်နဲ့ကြော်ထားပါတယ် ကြိတ်စက်မရှိပါက ငရုတ်ဆုံထဲ ထည့်ထောင်းနိူင်ပါတယ်။
၁၂မျိုးဟင်းချိုနဲ့အရမ်းလိုက်ဖက်တဲ့ ဟင်းအတွဲ ဖြစ်တာမို့လို့ မာမာကတော့ မကြာခန ချက်ဖြစ်ပါတယ် အသားစိုစိစိတွေထက်စာရင် ဒီလိုဟင်းမျိုးလေးတွေက ထမင်းကို ပိုပြီးမိန်စေပါတယ်။
နူးနေအောင်ပြုပ်ပြီး အရိုးထွင်ကာ ကြိတ်ထားသော ငါးရံ့ခြောက် - ၂၅ကျပ်သား
အခွံခွာပြီး အလုံးလိုက်ရေဆေးကာ ပါးပါးလှီးထားသော ကြက်သွန်နီ - ၂၅ကျပ်သား
ငရုပ်သီးလုံးခြမ်းခွဲ - ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်းခွဲ
ဆီ - လက်ဖက်ရည် အကြမ်းပန်ကန် တစ်လုံး
နနွင်းမှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း သုံးပုံ တစ်ပုံ
ဒယ်အိုးထဲမှာ ဆီနှင့် နနွင်းမှုန့်ထည့်ပြီး အပူပေးပါ
ဆီပူလာတာနဲ့ ကြက်သွန်နီကို ထည့်ပေးကာ နွမ်းသွားတဲ့ထိ ကြော်ပေးပါ
ကြက်သွန်နီ နွမ်းသွားတာနဲ့ ငရုတ်သီးမှုန့်ကိုထည့်ကာ မွှေးပြီးကြွတ်လာတဲ့အထိ ကြော်ပေးပါ
ကြက်သွန်များ ကြွတ်လာတာနဲ့ ဆယ်ပြီး ဆီစစ်ထားပါ
ဒယ်အိုးထဲမှာ ကျန်နေသောဆီနဲ့ဘဲ ငါးခြောက်ထောင်းကိုထည့်ပြီး ကြွတ်လာတဲ့အထိ ကြော်ပေးပါ
ငါးခြောက်ထောင်း ကြွတ်လာပါက အခုန ကကြော်ထားသော ကြက်သွန် ငရုတ်သီးကြော်ကို ငံပြာရည်နှင့် အချိုမှုန့်တို့ထည့်ကာ ထည့်ပြီး မွှေပေးပါ
အားလုံးကြွတ်ပြီး မွှေးလာပြီဆိုရင် အရသာမြည်းပြီး လိုသလို ပြင်းပေးပါ
ပြီးတာနဲ့ ပန်းကန်ထဲသို့ ပြောင်းထဲ့ပြီး မိမိနှစ်သက်သလို စားသုံးနိူင်ရန် ပြင်ပေးနိူင်ပါပြီ။
Posted by Tuumar at 3:10 am4comments:
ဒီနေ့တော့ မြန်မာ့ရိုးရာ စားစရာ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဆီထမင်း ထိုးနည်းလေး ပြောချင်ပါတယ် ဘယ်နေရာဘယ် ဒေသဘဲ ရောက်ရောက် ကိုယ့်ရိုးရာ အစာလေးတွေကိုတော့ လွမ်းမိတာ အမှန်ပါဘဲ။
ဒါကြောင့်မို့လဲ ဖြစ်နိုင်ရင် မြန်မာအစာတွေကိုဘဲ လွယ်ကူမြန်ဆန် နည်းလေးတွေနဲ့ လုပ်စားဖြစ်ပါတယ်
ဒီနေ့ထိုးဖြစ်တဲ့ ဆီထမင်းလေးက ဆီထမင်း ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအတွက် လွယ်ကူလွန်းတဲ့ ဆီထမင်းထိုးနည်းလေးမို့လို့ မာမာပြင်ဆင်တဲ့ နည်းလေးကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ကောက်ညှင်းဆန် - ထမင်းပေါင်းအိုး ဆန်ချင်ဗူး ၃ဗူး
ကြက်သွန်နီ - အနေတော် ငါးလုံး
ရေ - ထမင်းပေါင်းအိုး ဆန်ချင်ဗူး ၅ဗူး
ကောက်ညှင်းဆန်ကို ရဆေးပြီး ရေစစ်ထားပါ
အရင်ဆုံး ဒယ်အိုးထဲမှာ ဆီကိုထည့်ပြီး မီးအပူပေးပြီး နနွင်းမှုန့်ထည့်ပေးပါ
ဆီပူလာတာနဲ့ ကောက်ညှင်းဆန်ကိုထည့်ပြီး ကြော်ပေးပါ
ကြော်နေသော ကောက်ညှင်းဆန်ကို အဆက်မပြတ် မွှေပေးရင်း တစ်လုံးခြင်း ကွဲသွားတာနဲ့ရေ ဆား အရသာမှုန့်နှင့် ကြက်သွန်နီတို့ထည့်ပေးကာ အဖုံးအုပ်ပြီး တည်ပေးပါ
အဖုံးအုပ်ပြီး တည်တာနဲ့ မီးကို အနေတော်သို့လျော့ပေးပါ
အိုးတည်ထားစဉ် တခါနှစ်ခါလောက်ဘဲ မွှေပေးပြီး ရေခမ်းပြီဆိုတာနဲ့ မီးကိုထပ်ပြီး လျော့ပေးပြီး ဆီထမင်းမှာ စားရတာ အရသာ အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ ဆီထမင်းချိုးကို မီးအေးအေးနဲ့ ရအောင်တည်ပေးပါ
အကျက်ညီပြီး ဆီထမင်းချိုး လှလှလေး ရစေရန် မကပ်တဲ့ အိုးနှင့်တည်ပြီး တည်ထားစဉ် အိုးကို မကြာမကြာ လှည့်ပေးပါ
ဆီသံကြွတ်ကြွတ် မြည်လာပြီး ဆီထမင်းချိုး မွှေးမွှေးလေး ရလာပါက ပန်းကန်ထဲသို့ ပြောင်းထည့်ပေးကာ မိမိနှစ်သက်ရာ ပဲပြုပ် ငါးခြောက်ဆီစိမ်တို့နဲ့ တွဲဖက်ပြီး သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
Posted by Tuumar at 11:18 am No comments: